Askar lagu dilay toogasho ka dhacday magaalada Muqdisho
MUQDISHO, Soomaaliya - Labo Askari oo katirsanaa Ciidamada dowladda Federaalka Soomaaliya yaa lagu dilay magaalada Muqdisho, xilli amniga uu faraha kasoo baxayo.
Dabley hubaysan ayaa labada Askari oo kamid ahaa Militeriga Soomaaliya ku dhex dilay Guri ay ka deganaayeen nawaaxiga Warshadii hore ee Baastada, sida ay dadka deegaanka u xaqiijiyeen Warsidaha Garowe Online.
Kooxda dilka fulisay ayaa goobta isaga baxsatay kahor inta aysan Ciidamada dowladda soo gaarin, waxaana socda baaritaan la xiriira falkaasi oo qeyb ka ah dhacdooyin amni darro oo mudooyinkii dambe ka dhacayay Muqdisho.
Habeen kahor, Xildhibaan katirsanayd Baarlamaanka Koonfur Galbeed oo lagu magacaabi jiray Ruqiyo Abshir Nuur ayaa lagu dilay degmada Shibis ee gobolka Banaadir.
Marka laga soo tago dilalka qorsheysan, qaraxyo dhowr ah ayaa bishan ka dhacay Muqdisho kuwaasi oo ugu dambeeyay mid shalay ka dhacay nawaaxiga Isgoyska Zoobe, kaasi oo uu ku dhintay Shaqaale katirsanaa Hay'adda ICRC.
Xaaladda goobta ayaa isku bedeshay kala carar iyadoo ciidamada ay rideen rasaas culus.
Weerarada Sri Lanka: Dad la xiray iyo baraha bulshada oo la xanibay 21.04.2019. 14:59